Wax aan kala socdo ma jirto heshiiska la sheegayo in lala gaaray Shirkado Shidaalka Baara.. Geeddi
Wararkii: July 18, 2007
Cali Max�ed Geedi "Wax aan kala socdo ma jirto heshiiska la sheegayo in lala gaaray Shirkado Shidaalka Baara"
Taliska Booliiska oo shaaca ka qaaday in uu sii socon doono hawlgalada Suuqa Bakaaraha
Ganacsatada Bakaaraha oo beesha Caalamka ka codsaday inay soo faragelinayaan xaaladda Bakaaraha
Ra�isul Wasaaraha DFKMG, Geedi, oo dib ugu soo laabtay Muqdisho
Dad Soomaali ah oo lagu qabtay Ciraaq kadib markii la sheegay inay qayb ka ahaayeen kooxaha dagaalada ka wada Ciraaq
Cali Max�ed Geedi �Wax aan kala socdo ma jirto heshiiska la sheegayo in lala gaaray Shirkado Shidaalka Baara�
Wargeyska Financial Times ee arrimaha dhaqaalaha ka faalooda ayaa qoray in shirkad shidaalka baarta oo laga leeyahay dalka Shiinaha ay heshiis la gaartay Xukuumadda Federaalka, heshiiskaas oo uu sheegay Wargeysku in shirkadda shidaalka Shiinaha u ogolaanayey in ay Soomaaliya ka baari karto shidaal.
Ra�isul Wasaaraha DFKMG Cali Max�ed oo wareysi siiyey wargeyskaas ayaa sheegay in arrintasi uusan isagu waxba kala socon, isla markaan aysan jirin, waxa uuna Ra�isul Wasaaruhaha DFKMG sheegay in heshiis aan lala gaari Karin shirkad shidaal, ilaa laga soo saarayo sharciga kheyraadka dalka oo laga sugayo Baarlamaanka [oo laga filayo labada bilood ee soo socota, waa sida warkeysku ka soo xigtay Geeddi, July 16, 2007, isagoo joogey Nairobi].
Hadalka Cali Max�ed Geedi ayaa yimid kadib markii uu Wargeysku sheegay in y arkeen Dukumentiyo cadeynayay in Madaxweynaha Dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf Axmed iyo Shirkadda Shinaha ee Shidaalka ee lagu magacaabo (China International Oil and Gas) iyo waliba shirkad iyana lagu magacaabo CNOOC ay 24-kii May 2006 wada gaareen heshiis Shidaal looga baarayo Soomaaliya, balse Ra�isul Wasaaraha DFKMG Geedi ayaa wargeyska u sheegay in ay jiraan shirkado badan oo doonay in ay saliid ka baaraan Soomaaliya, balse aan fasax awoodeed lagu shaqeyn Karin, ilaa la helo sharci arrintaasi fasixi kara.
Xasan Abshir oo gacanta ku haya buug ay ka muuqato calaamada CNOOC, July 2006, Garoowe
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa ka dhawaajiyay inuu sii socon doono Howlgalada Suuqa weyn ee Bakaaraha oo galay maalintii 13aad.
Sarkaalka ugu sareeya Ciidamada Howl galka ka fulinaya suuqaas ayaa sheegay in xaalada suuqa ay tahay mid ka duwan sidii hore, wuxuuna xusay inuu sii socon doono howlgalka ay wadaan ciidamada dowladda.
Ciidamo Boolis ah iyo Milateri ayaa ku gadaaman suuqaas, iyagoo ka wada howlo baaritaan ah oo daba socda weeraro lagaga soo horjeedo iyo goobo hub sharci daro ah ay ganacsatada ku keydiyaan oo ciidamadu ay ku raad joogaan.
Col. Yuusuf Xusen Dhumaal oo ah Afhayeenka Ciidamada Howlgalada suuqaas ayaa sheegay in howlgalka uu yahay mid ay ku doonayaan in suuqa ay kaga dhigaan meel ammaan ah, isagoo xusay in suuqa uu yahay meelaha weerarada laga soo abaabulo.
Taliyaha waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan howl-gallada ciidamada ay ka wadaan suuqa Bakaaraha, waxaana uu tilmaamay in ganacsatada suuqa Bakaaraha ay gacan ka geystaan amniga suuqa, isagoo sheegay in ay la shaqeeyaan ciidamada booliska.
Howl galada Ciidamada Dowladda wali ka wadaan suuqa bakaaraha, ayaanan wali aysan ku guuleysan in suuqaas ay si rasmi ah u sugaan ammaankiisa, iyadoo maalin kasta ay suuqa ka dhacaan weeraro ka dhan ah Ciidamada Dowladda. Askar ka tirsan Ciidamada Dowladda ayaa ku naf waayey mudada uu socda Howl galkaas, kuwaasoo ay sii caga cageynayaan ilaa tobaneeyo. walow xaaladda suuqa ee maanta ay u muuqato mid degan balse lama oga wixii dib ka dhici doono.
Ganacsatada Suuqa Bakaaraha ayaa ka codsatay beesha caalamka in ay soo faragaliyaan xaaladaha murugsan ee ka aloolsan suuqa Bakaaraha oo dhaqdhaqaaqiisa ganacsi muddo 13 maalmood ay hakiyeen ciidamada dowladda KMG ah.
Mas'uul u hadlay ganacsatada suuqa Bakaaraha oo la yiraahdo Max'ed Salaad ayaa sheegay in shaqo la'aan ay soo wajahday oo ciidamada dowladda ay gabi ahaan ganacsigooda ay hakiyeen, isla markaana aysan bakhaaradooda kala bixi karin wixii ku jira sababo la xiriira askar hortaagan irid walba, qofkii ay arkaana xabad ku ridaya.
" Waxaan codsi u gudbineynaa beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka in ay soo fara galiyaan cunaqabateynta ay ku soo rogeen ciidamada dowladda suuqa Bakaaraha" ayuu yiri Ganacsadahaan oo intaasi raaciyay in aanu garaneyn waxa ku koobay howl-gallada suuqa Bakaaraha oo ay furan yihiin dhamaan suuqyada kale ee Muqdisho. Waxa uu sheegay in ciidamada ay ku eedeynayaan ganacsatada in ay taageeraan maxkamadihii islaamka, isagoo yiri " arimahaasi waa kuwo been abuur ah, dowladana horey ayaanu ugu wareejinay hubkeena, mana ahan meelo laga waxyeeleeyo dowladda suuqa Bakaaraha".
Waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ka dhaca suuqa Bakaaraha ay waxyeelada ugu badan ka soo gaarto shacabka, isagoo sheegay in ay xiriiro la sameeyeen talisyada ciidamada isla markaana ay u gudbiyeen in ay wax ka qabtaan, laakiin wali aanu jirin wax laga qabtey.
�Waxaan kulamo la soo qaadanay mas�uuliyiinta wadamo badan oo isku afgaranay qodobo muhiim ah�
Ra�isul Wasaaraha Dowladda Federaalka Cali Max�ed Geedi ayaa shalay dib ugu soo laabtay Magaalada Muqdisho kadib markii uu safaro kala duwan ku soo kala bixiyey wadamada, Mareykanka, Gaana, Sucuudi Carabiya iyo Kenya. Cali Max�ed Geedi ayaa Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Magaalada waxaa ku soo dhaweeyey mas�uuliyiin kala tirsaneyd Golaha Xukuumadda iyo Baarlamanka, waxaana soo dhaweysmadiisii kadib uu kulan albaabadu u xirnaayeen la qaatay Madaxweynaha Dowladda Federaalka C/llaahi Yuusuf Axmed.
Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi ayaa intii uu ku sugnaa dalka Mareykanka waxa uu Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobey ka codsaday in Dowladda Federaalka gacan la siiyo, isla markaan ciidamo caalami ah la keeno Soomaaliya si ay u bedelaan kuwo Midowga Afrika, sidoo kale waxa uu Socdaal ku soo maray Sucuudiga Carabiya, oo uu kala hadlay sidii Dowladda Sucuudiga ay qayb weyn kaga qaadan lahayd dib u dhiska dalka, sidoo kale waxa uu Cali Max�ed Geedi Magaalada Akra ee dalka Gaana kaga qaybgalay shirkii Madaxda Afrika, waxa uuna sheeg ay Ra�isul Wasaaruhu inay madaxda Afrika ka aqbaleen in ay dowladda gacan siiyaan.
Dowladda dalka Ciraaq ee Mareykanku taageero ayaa sheegay in ay qabqabatay rag Soomali ah, oo ay sheegtay in ay ka qayb-qaadanayeen dagaalada ka socda dalkaaasi Ciraaq ee ay wadaan kooxaha ka soo horjeeda ciidamada Huwanta ah ee dalkaasi dagaalka ku qabsaday.
Dowladda Ciraaq ayaa sheegtay in raggaani oo tiradoodu gaareyso 4 qof, isla markaana lagu soo qabtay hawlgal ay sameeyeen ciidamada Ciraaq iyo kuwa Mareykanka, waxayna sheegeen saraakiil u hadashay Dowladda in raggaani lagu maxkamaxdeynayo maxkamad ku taala Magaalada Baqdaad ee caasimada Ciraaq.
Taleefishinka Ciraaq oo warkaani shaaciyey ayaa sheegay in ragaani ay kala yimaadeen markoodii hore Soomaaliya iyo Tanzaniya.
Binti Jaylaani iyo Aabbaheyd waxay u baahan yihiin $2500 (Labo Kun iyo Shan Boqol Doolar) si ay u gaaraan Mareykanka.
.Mujaahdiinta S/Galbeed Oo Dagaalo Qaraar La GalayTigreega
.Kabta Hayga Goyn Oo Ka Dhacday Madashii Shirka...
.Bosaso: Shirkad Ilaalisa Xeebaha Soomaaliya oo la shaaciyey
Wararkii oo dhan ka akhri halkan... July 17
Jaamacada Gedo oo Loogu Yaboohay $179,000
Warbixin: Kulankii Jaamacadda Gedo oo Ka dhacay London.